Hetsika maneran-tany ho an'ny fanovana ifotony
Ny fanamboarana ny jono sy ny famerenana ny fiainana an-dranomasina dia lehibe lavitra noho ny fikambanana iray irery.
Faly izahay fa tafiditra ao anatin'ny hetsika maneran-tany mihamitombo mba hananganana ranomasimbe mahazaka sy hanandratana ireo mpanjono madinika. Hetsika misy mpanjono no ivony, izay manome feo sy fitaomana iombonana ho azy ireo hiaro sy hampiroborobo ny zony, hanentana ny fiarahamonim-pirenena midadasika kokoa ary hanentana ny fifampiresahana amin'ny governemanta momba ny fanavaozana ny politika.
Hetsika izay miasa amin'ny fiarovana ny zon'ny fitantanana sy ny fitantanana ho an'ny vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana. Hetsika miorim-paka amin'ny foto-kevitry ny fanekena maimaim-poana mialoha sy nampahafantarina ary ao amin'ny Torolàlana an-tsitrapo FAO momba ny fiarovana ny jono madinika.
Hetsika izay manome vina vaovao ho an'ny fiarovana an-dranomasina izy io, izay mihodinkodina mihoatra ny lasibatra fiarovana tsy ara-dalàna toy ny 30×30, ary miompana amin'ny fandrindrana ny fitantanana ny rano eo an-toerana. Hetsika izay mikatsaka ny hanatratra ny tanjona amin’ny fiarovana amin’ny fiarovana ny sakafo sy ny fiveloman’ny jono madinika.
Ny fampielezan-kevitray ankehitriny
Ny fomba tsara indrindra hiarovana ny zavaboary dia ny fiarovana ny zon'olombelona izay monina eo aminy sy miankina aminy.
Vakio ny taratasin'ny toeranay
Transform trawling ambany
Tianay ny hahita ny trawling ambany hokarakarain'ny firenena amorontsiraka rehetra, miaraka amin'ny porofo fa mihena ny dian-tongotra amin'ny 2030.
Ny laharam-pahamehanay amin'ny advocacy
Fizarana vaovao mampientam-po amin'ny tantarantsika ity, ary mbola eo am-pamolavolana ny printy tsara izahay. Saingy ao anatin'ny dimy taona manaraka, dia manolo-tena amin'ny laharam-pahamehana dimy izahay mba hiarovana ny zon'ny mpanjono nentim-paharazana sy ny fiarovana ny fiainana an-dranomasina ho avy.
Miaro ny zo manokana amin'ny ranomasina akaikin'ny morontsiraka ho an'ny mpanjono madinika izahay, miasa amin'ny famerana ny jono indostrialy ao anatin'ireny tontolo iainana an-dranomasina saro-pady sy tena ilaina ireny.
Manolo-kevitra ny hampitsaharana ny fanjonoana indostrialy manimba izahay, toy ny fanjonoana any ambanin'ny ranomasina. Ny jono indostrialy midadasika dia mampiasa ampahany amin'ny mpanjono eran'izao tontolo izao, miantehitra amin'ny famatsiam-bola, angovo azo avy amin'ny fôsily, ary manary hatramin'ny roa ampahatelon'ny totalin'ny trondro azony.
Mampiroborobo ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fitantanana ny jono izahay, mampiakatra ny feon'ireo tovovavy sy vehivavy mpanjono eo amin'ny sehatra nasionaly sy maneran-tany ary misolovava toerana bebe kokoa eo amin'ny latabatra fandraisana fanapahan-kevitra.
Manolo-kevitra ny hamerenana ny fanampiana ara-jono manimba izahay hanohanana ny jono madinidinika mitombina sy maharitra. Ny famatsiam-bola manimba dia mandrisika ny fanjonoana tafahoatra, ny fanimbana ny toeram-ponenany ary ny famoahana entona mandatsa-dranomaso, indrindra amin'ny fiaramanidina indostrialy.
Miaro ny fangaraharan'ny jono nasionaly sy iraisam-pirenena izahay, mifototra amin'ny fenitra iraisam-pirenena novolavolain'ny Hetsika mangarahara amin'ny jono, Fijerena ny jono manerantany ary EJF.
Amin'ny alalan'ireo hetsika rehetra ireo no hanandratanay ny feon'ireo mpanjono sy hampita ny tantarany mba hahafahan'izy ireo manana toerana sahaza amin'ny famolavolana politika sy ny fampandrosoana ny rariny momba ny toetrandro.